SAWIRRO: Kooxda Arsenal oo maanta bilowday tababarkii fasal-ciyaareedka 2018-19 | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha SAWIRRO: Kooxda Arsenal oo maanta bilowday tababarkii fasal-ciyaareedka 2018-19
SAWIRRO: Kooxda Arsenal oo maanta bilowday tababarkii fasal-ciyaareedka 2018-19
ST ALBANS, ENGLAND - JULY 03: Pierre-Emerick Aubameyang of Arsenal attends a medical screening session at London Colney on July 3, 2018 in St Albans, England. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)
(London) 03 Luulyo 2018 – Laacibiinta kooxda Arsenal ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay tababarka ay iskugu diyaarinayaan fasal-ciyaareedka 2018-19 oo uu sanadkan markii ugu horreeysey muddo 2 toban sanaale ka badan uu ku hoggaaminayo macallinkooda cusub ee Unai Emery.
Macallinkan reer Spain ayaa beddelaya Arsene Wenger oo kooxdaa halyeey uga qoran, wuxuuna tababarkii maanta ku bilowday wejiyo dhowr ah oo cusub oo uu isaga laftiisu ku jiro.
Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang iyo Hector Bellerin ayaa ka mid ah xiddigaha maanta kasoo muuqday xerada tababarka London ee Colney.
Previous articleSAWIRRO: Ma dowladda federaalka & Imaaraatka ayaa is fahmey? (Kulan dhacay)
Next articleSAWIRRO: Qadar oo qiimayn ku samaynaysa dekedaha Somalia (Ma howl sax ah mise humbaallayn?)